CALEEMAHA BILBERRY: GURYAHA DAWOOYINKA IYO KA HORTAGA - BLUEBERRIES
Ugu Weyn Ee Blueberries
Dad badan ayaa maqlaya faa'iidooyinka blueberries, laakiin dad yar ayaa og in caleemaha blueberry ay sidoo kale leeyihiin bogsiinta guryaha.
Maanta waxaan fiirin doonaa macluumaadka ku saabsan blueberries, iyo gaar ahaan - sababta ay u isticmaalaan blueberries, kala hadal guryaha faa'iidada leh iyo iska hor imaadyada isticmaalka alaabta.
Caleemaha boogaha waa la mahadcelinayaa content sare inulin, flavonoids, anthocyanins.
Ma taqaanaa? Laga bilaabo Laatiin, blueberry magaca science waa tarjumo "lo'da" maxaa yeelay caleemaha noocyada dhirta qaarkood waxay ku habboon yihiin quudinta lo'da.
Sidoo kale waxaa jira waxyaabo korodhsan caleemaha:
glycosides: neomirtillina - ilaa 2% iyo mirtillina - ilaa 1%;
xeryahooda phenolic: arbutin, methylarbutin - 2%;
saponins triterpenic: ursolic iyo oleic acid;
Waa maxay faa'iidooyinka caleemaha blueberry
Iyada oo la adeegsanayo alaabta ceeriin ee la tixgeliyo ayaa la gaari karaa:
jimicsiga jidhka ee leh antioxidants;
ka ilaalinta saamaynta dibadda ee waxyeellada leh;
gargaarka daaweynta cudurada kaadida;
saameyn ku leh aragtida;
joojinta caabuqa iyo xanaaqa maqaarka;
Caawinta cudurrada caloosha iyo caloosha;
Xeerarka sonkorta iyo kolestaroolka dhiigga;
ka hortag dhacdo dabiiciga ah;
saameyn ku leh nidaamka wadnaha;
Akhri sidoo kale ku saabsan guryaha faa'iido leh iyo codsiga raspberry iyo cherry caleemo.
Goorta la ururiyo iyo sida loo qalajiyo
Tixgeli marka ay ka wanaagsan tahay inaad soo ururiso caleemaha cirridka iyo sida loo qalajiyo alaabta ceeriin ee shaaha.
Waxaa lagama maarmaan ah in la ururiyo alaabta ceeriin ah si loo qalajiyo oo loo isticmaalo ujeedooyinka daawooyinka dhammaadka guga. Xaaladda ugu weyn ee ururinta - ma berry ah on duurkasi ay u yar yihiin, kaliya kiiskan waxay ku jiri doonaan inta ugu badan ee maaddooyinka waxtarka leh oo ay yeelan doonaan saameynta lagama maarmaanka ah.
Blueberries aad ayay u dareen badan tahay nadiifinta bey'ada waxayna keeni kartaa walxaha sunta ah. Haddii aad aragto dhibco cad ama midab madow ah, muraayad madow ah oo ku jirta saxan yar-yar, xayawaan la qalajiyey, ka dibna uruurinta walxo cayriin ah oo ku taala baadiyaha sida laguma talinayo.
Ma taqaanaa? Ruushka, ereyga "blueberry" (ereyga "madow") ayaa kacay sababtoo ah saamaynta khatarta ah ee berry dhirta ayaa bixiya.
Waa lagama maarmaan in qalajinta alaabta ceeriin dibedda ka baxdo, laakiin maaha qorraxda tooska ah, laakiin meel bannaan. Si aad u qallajiso geedka, waxaad isticmaali kartaa qallajiye khaas ah miro: heerkulka waa in la dhigaa qiyaastii 40 ° C. Kadib markaad qalajiso, daroogadu ma badalin midab iyo weli cagaar dhalaalaya. Haddii aad si lama filaan ah u aragto in qaar ka mid ah walxaha ay madoobaato, ma isticmaali kartid - qalab cayriin ah ayaa loo tixgeliyaa inay yihiin tayad liidata.
Sida loo kaydiyo guriga
Boorsooyinka ama bacaha kookarka waxay ku habboon yihiin kaydinta alaabta ceeriin ah ee la helo si ay alaabtu u wanaagsan tahay.
Inta lagu jiro kaydinta muddada dheer, waa in la hubiyaa joogitaanka cayayaanka ama cayayaanka. Nolosha sheyga waa 2 sano haddii lagu kaydiyo mugdi, maaha qoyan, meel diiran.
Waxaan kugula talineynaa inaad ka akhrido waxtarka iyo khatarta shaaha laga sameeyey samaha, malaawada liinta, acacia caddaan, linden, magonia, lakab, geedka canjiga Shiinaha, dahabka, dhirta qoryaha, gogolka, quinoa, hooyada iyo hooyada, guntinta, mishiinka.
Sida loo sameeyo shaaha bluubka
Shaaha laga sameeyey caleemaha blueberry waxay aad u la mid tahay decoction ee berry cusub: farqiga kaliya waa in aysan jirin daxasho, taas oo caan ku ah berry.
Tixgeli sida loo habeeyo caleemaha blueberry si ay u helaan shaah caafimaad leh.
Si aad u soo dhajisid shaaha delicious ka soo blueberry alaabta ceeriin isticmaalka maalin kasta, waa inaad isticmaashaa on litir oo biyo ah karkarin 4 qaado oo la jarjaray alaabta ceeriin ah, iyo in dheriga shaaha ku adkeysanaya ku dhawaad ​​nus saac.
Waxaa jira cuntooyin badan oo u oggolaanaya isticmaalka daroogada daaweynta cudurrada kala duwan, iyo sidoo kale alaabooyinka qurxinta guryaha, sidaas darteed waxaan ka fekereynaa faahfaahin dheeraad ah iyo hababka isticmaalka.
Waxaan kugula talineynaa inaad akhrido hababkii goosashada (gaar ahaan, barafka) blueberries jiilaalka.
Cuntada hilibka Bilberry ee miisaanka lumiska waxaa loo isticmaalaa sida gaajo-gaabis ah, waxay kuu oggolaaneysaa inaad sare u qaaddo geeddi-socodka dheef-shiid kiimikaadka. Wixii diyaarinta faleebo waa in la isticmaalo 2 tsp. qalabka ceeriin iyo 500 ml biyo karkaraya. Isku dariddu way ka fiican tahay inaad ku shubto darmuusta oo ku adkeyso ilaa 4 saacadood. Ka dib markaa, daadi oo cab 100 ml subaxdii iyo habeenkii, inta lagu jiro muddada miisaanka lumay.
Caawin wanaagsan oo blueberry ayaa baxa marka sokorowgaiyo sidoo kale dadka qaba oof-wareenka, cudurada barar ee mareenka kaadida. Waxaa lagama maarmaan ah in loo diyaariyo daawada hal qaado oo ah walxo cayriin ah oo la jarjaray iyo bakeer biyo ah. Waxaa lagugula talinayaa inaad xirto weelka si adagna u adkeyso 60 daqiiqo. Marka xigta, qalabka soo-baxa ayaa la jaraa oo la qaboojiyaa, wuxuu isticmaalaa 200 ml afar jeer maalintii.
Dawo loogu talagalay cagaarshow: waxay qaadan doontaa 60 g oo ah qalabka bilberry ee qalalan si aad u diyaarsato badeecadda, kaas oo lagu shubay 1 l oo biyo ah, kadibna waa inaad sugtaa 1 saac, adigoo xiraya weelka daboolka. Isticmaal isku dar ah oo kuleyliya ilaa 36 ° C kahor intaan la isticmaalin Isticmaalka dareeraha waxaa loo isticmaalaa enema, kaas oo lagu duro fiidkii ka hor hurdada. Iyadoo maqaarka maqaarka: Maadaama daroogada ay leedahay bogsasho iyo saameyn antiseptic, blueberries yar yar oo la jajabiyey ayaa lagu daboolayaa nabarka, kuwaas oo lagu dhejiyo dhaymo faashad. Marka boogadu wali tahay mid cusub, dhaymada waa in la beddelo 3 saacadood kasta, iyo marka ay wax yar ku bogsato 8 daqiiqo kasta.
Dadka xanuunsan dhiig yariWaxaa lagula talinayaa in aad diyaariso daawada ka soo caleemaha blueberry. Tani waxay u baahan tahay inaad isticmaasho 6 tbsp. l qalabka qashinka qalalan qalaji, ku shub hal litir oo biyo ah karkaraya. Sug ilaa 3 saacadood, daadi cab oo cab afar goor maalintii, qiyaas ahaan 250 ml.
Baro sida shaaha ka soo baxa ubaxa, hawada, blueberry, buckthorn badda, ash buurta cas, princess, chokeberry, tufaax waa waxtar u leh jirka.
Caleemaha lafdhabarta ayaa aad ugu qiimeeya kiknoolajiyada waxaana loo isticmaalaa maaskaro - waxay cunaan, nuugaan oo qallajiyaan maqaarka.
Waa muhiim! Inta badan haweenka si firfircoon u isticmaala blueberries ee kondhomoolka guriga, ogow in caleemaha blueberry aysan ka tagin midabka mugdiga ah ee adag in laga saaro, ka duwan sida berry. Sidaa darteed, si aad u isticmaasho badeecada ka timaad qalabka cayriin sida cabsi la'aan.
Alaabta ceeriin ee cusub ama qalalan ayaa la isticmaali karaa si loo sameeyo gruel, kaas oo lagu daraa qaaddo kareem ah oo isku qasan, ka dibna ku rid maaskarada qoorta, waji iyo ka baxso 30 daqiiqo. Ku dhaq biyo diirran. Alaabta ceeriin ee bacaha leh waxay leedahay antiseptic iyo boog-bogsiin guryaha kuwaas oo u oggolaanaya in ay qallalaan finanku ayna saaraan saamaynta finanku. Si tan loo sameeyo, waxaad diyaarin kartaa decoction caadiga ah ee alaabta ceeriin ceeriin iyo daaweyn iyaga waji.
Sidoo kale, daawada la jarjarey ayaa lagu daadi karaa biyo karkaraya si aad u sameysid cufan, ku adkeyso oo isticmaal sida saldhig u ah maskooyinka, taas oo lagu daro borotiinka dufanka leh ama dhoobada quruxda leh.
Qalabka ceeriin ee su'aasha ah waa shey aan waxyeello lahayn, laakiin waxaa jira weli waxoogaa xaddidan isticmaalka.
Waa muhiim! Qodobka ugu muhiimsan ee isticmaalka caleemaha blueberry waa oksalaturia.
Waxaa jira waxyaalahan soo socda oo ah in la tixgeliyo marka isticmaalka daroogada blueberry:
Haddii aad isku aragto caloosha, ka dibna waxaa lagula talinayaa in lagu daaweeyo caleemaha blueberry si aad u taxadar leh iyo muddo aan dheereyn, maaddaama horumarinta xuubka mindhicirka uu suurtagal yahay.
Si tartiib ah u isticmaal caleemaha blueberry haddii aad qabtid cudurada beedka.
Iyadoo la tixgelinayo in dhirta ay ku jirto tiro badan oo ah hydroquinone, ee maamulka muddada dheer waxaa lagama maarmaan ah in la qaato nasasho gaaban, sida saameynta kansarka suurtogalka ah ee jirka.
Dareen-celinta xasaasiyadeed ayaa laga yaabaa inay dhacdo, laakiin waxay u dhawdahay inay dhif u yartahay waxayna ku xiran tahay dareenka jirka ee alaabtan.
Sidaa daraadeed, blueberry wuxuu ka caawiyaa in uu daaweeyo cuduro badan, waxa ugu muhiimsan waa in la tixgeliyo sifooyinka jidhka oo dooro qodheer si waafaqsan dhibaatada jirta.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Blueberries 2019